Ebubo Xiaomi Mi MIX 4 nke ụlọ ọrụ China kwadoro ka 3C | Gam akporosis
Xiaomi Mi MIX 4 na-erukwu nso: ọ nwetala asambodo 3C na 5G
Xiaomi na-akpụzi ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ ama ama ama ga - eweta ekwentị 5G n’ahịa, ma ọ bụrụ na ndị ọzọ anaghị atụ anya ya. Nke a edebanyela aha na njikọ a na nchekwa data nke ụlọ ọrụ 3C na China, yabụ ọ ga-ekwe omume na izu ole na ole ma ọ bụ ụbọchị ole na ole ụlọ ọrụ ga-ekpughere ya.
Akara akara akwụkwọ nke China (CCC ma ọ bụ 3C dị ka a maara ya nke ọma na nke ọma) bụ ihe akaebe dị nso na a ga-ebupụta ngwaọrụ n'oge na-adịghị anya. Onye ọ bụla ejiri akara a kwadoro dị nso na ya, yana, gbasara Xiaomi na ekwentị 5G ọzọ, Mi MIX 4 -Kedu nwere ike ibata na mgbụsị akwụkwọ- bụ nke yiri ka ọ gafere n'aka ụlọ ọrụ ịgba akwụkwọ.
1908CC depụtara M1F3XE na nso nso a. Nke a gosipụtara ihe ekwuru: ọ bụ ekwentị nwere njikọ 5G. Ọ na-ekpughekwa na chaja 'MDY-10-EX' nke akwadoro yana ekwentị na-akwado ibu ruru 45 watts, dị ka Xiaomi Mi 9 na ọdụ ndị ọzọ.
Ka ọ dị ugbu a, ihe anyị na-akwado bụ ichere maka ụfọdụ ozi na-enweghị mgbagha na-egosi na ama ama a ekwuru aha ya bụ Xiaomi Mi Mix 4. nke a na-eche ogologo oge, n'agbanyeghị, Ọ bụ ihe ziri ezi iji nweta echiche ma metụta ya na ekwentị mkpanaaka a.
Xiaomi Mi MIX 4 ga-enwe nkwụnye ụgwọ ikuku
Ndị mmadụ na-ekwu otú ahụ onye nrụpụta China nwere ike ịmalite Mi MIX 4 dị ka MI MIX 5. N'ihi gịnị? Ọfọn, na China ihe niile metụtara nọmba anọ bụ ajọ njọ, dịka ọnụọgụgụ iri na atọ nọ na West, n'ihi na "ọ bụ chi ọjọọ." Ya mere, ohere nke smartphone anaghị agbaso usoro ọgụgụ dị elu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Xiaomi Mi MIX 4 na-erukwu nso: ọ nwetala asambodo 3C na 5G
UMIDIGI X: Ekwentị ọhụụ a na - ahụ anya
Huawei weputara ekwentị izizi ya n’enweghi gam akporo n’afọ a